Shiinaha Polyurethane Hose Taxanaha Warshada, Alaabta Taxanaha ah ee Polyurethane
Tuubbada Biyo-baxa Kiimikada oo Balaadhan
Tuubbada waraabka beeraha ee polyurethane gaadiidka masaafo dheer oo biyo ah oo aan lahayn dareere, waxay la qabsan kartaa noocyo kala duwan oo dhul ah oo adag, looma baahna in la furo godad, biyo badan oo dhibco ah, ma dhaawici doonto deegaanka beerta asalka ah, sahayda biyaha ee go'an ayaa ku habboon maaraynta. Tuubbada beeralayda ee polyurethane laba-geesood leh waxay ka kooban tahay lakabka tidcan ee polyester-ka, daboolka wax-qabashada ee polyurethane ee hal mar laga keeno.Waxay leedahay iska caabin xirxiran oo heersare ah, dherer hoose, heerka qulqulka cutubka weyn, iyo heerkulka adeegga (- 50℃- 70℃).
Waagii hore, noocan oo kale ah biyo-biyoodka fogaanta, hawl-wadeennada garoonka waxay inta badan isticmaalaan birta birta ah, tuubada PE ee sahayda biyaha, laakiin marka la barbar dhigo biyaha jaban ee gaarka ah ee tuubada polyurethane ee ballaaran, tuubooyinkani waa kuwo waaweyn, oo ay adagtahay in la dhigo. Xoog-isticmaalka, markaa si tartiib tartiib ah ayaa loogu beddelaa tuubo isku dhafan oo polyurethane ah.
Thetuubada polyurethane laba-geesoodka ahwuxuu qaataa hal mar habka co- extrusion samaynta, kaas oo ka kooban TPU lakabka caagga gudaha, lakabka tidde fiber xoojiyay iyo lakabka caag dibadda TPU.Xadhkaha korantada waxaa lagu daraa xadhkaha fiber-ka si loo xalliyo dhibaatada korontada ee joogtada ah ee tuubada inta lagu jiro geeddi-socodka gaadiidka saliidda, waxayna hubin kartaa badbaadada iyo waxtarka gaadiidka saliidda, waxayna qaadi kartaa gaasta, biyaha, saliidda iyo warbaahinta kale, iyo gaadiidka. dhexdhexaad Wax wasakh ah.